Kheyraadka iyo Qalabyada lagu horumarinayo sawirada | Abuurista khadka tooska ah
Ogow waxa ugu fiican qalab iyo barnaamijyo la heli karo Markaad horumarinaysid shaxanka, shaki la’aan waa wax had iyo jeer waxtar leh marka lafilayo waxa jira waana sidoo kale marka la adeegsanayo wanaag isku-darka kheyraadka garaafyada qaarkood, waa suurtagal in la habeeyo qalab xayeysiin ah, oo leh awood weyn oo soo jiita dareenka dadka sababo la xiriira heerka isgaarsiinta muuqaalka ah.
1 Kheyraadka loogu talagalay diyaarinta faahfaahinta internetka
3 Kheyraadka muuqaalka sawirada
4 Bangiyada Icon ee aad isticmaali karto markaad sameysid shaxankaaga:
5 Qalabka ugu wanaagsan ee lagu abuuri karo sawir-qaadis
6 Qaar ka mid ah qalabka ugu caansan ee la yaqaan badanaa waa kuwa soo socda:
7 Nidaamyada naqshadeynta bilowga ah ee ku-saleysan shaxanka
8 Qalabka ku saleysan garaafka bulshada
Kheyraadka loogu talagalay diyaarinta faahfaahinta internetka
Sameynta sawir-qaadashada waxay noqon kartaa wax yar marka hore, si kastaba ha noqotee, markaad horeyba waxoogaa u qabatay, fikradaha ayaa laga yaabaa inay maqan yihiin, markaa hoosta waxaan ka hadli doonaa qaar ilaha kaa caawin kara inaad hesho dhiirigelinta aad u baahan tahay si aad u sameysid faahfaahintaada.
Pinterest: Waa a shabakada bulshada halkaas oo aad ka heli karto dhowr shirkadood oo ka tirsan qaybta kuwaas oo u heellan inay daabacaan mashaariicdooda / shaqadooda naqshadeynta, iyo sidoo kale waxyaabo muuqaal ah iyo qaar ka mid ah faahfaahinta oo faa'iido u yeelan kara tixraac ahaan.
Macluumaad Maalinle ah: Mid ka mid ah macluumaadka ugu fiican ee la abuuray maanta ayaa badanaa lagu daabacaa maalin kasta boggan.
Dribbble: Waxay ka kooban tahay degel halkee waad wadaagi kartaa shaqadaada naqshadeyntaIyo sidoo kale inaad la macaamili karto asxaabta kale ee naqshadeynta ah.
Behance: Waa a shabakadda internetka loogu talagalay faylalka shaqooyinka.
Kheyraadka muuqaalka sawirada
Hadda waxaan kuu magacaabaynaa qaar ka mid ah degellada iyo ilaha taasi waxay noqon kartaa mid waxtar leh markaad ka shaqeyneyso waxyaabahaaga muuqaalka ah:
Bangiyada Icon ee aad isticmaali karto markaad sameysid shaxankaaga:
Qalabka ugu wanaagsan ee lagu abuuri karo sawir-qaadis
Hadda waxaa jira qalab badan oo aad u kala duwan loogu talagalay horumarinta infographics, taasi waa sababta ogaanshaha kuwa ugu fiican iyo ogaanshaha midkee baa ku habboon baahiyahaaga iyo xirfadaha, waxay noqon karaan kuwo muhiim ah marka la horumarinayo.
Qaar ka mid ah qalabka ugu caansan ee la yaqaan badanaa waa kuwa soo socda:
Adobe Photoshop: Waxay ka kooban tahay qalab loo isticmaalo marka lagu shaqeynayo sawirrada.
Adobe Illustrator: Waa software-ka naqshadeynta vector-ka ee la isticmaalo marka la sameynayo Infographics.
Adobe ka dib Raadka: Waa aaladda saxda ah haddii aad rabto inaad sameyso sawir-gacmeed firfircoon.
Erey: Waxay ku habboon tahay abuurista daruuraha ereyga.
Sketch: Tani waa ikhtiyaarka aasaasiga ah ee Photoshop.
Nidaamyada naqshadeynta bilowga ah ee ku-saleysan shaxanka
Hadda waxaan ka hadli doonaa saddex qalab oo loogu talagalay abuurista sawir-gacmeedka, Loogu talagalay gaar ahaan isticmaalka bilowga adduunka naqshadeynta garaafka.
Piktochart.com: Waxay ku habboon tahay diyaarinta faahfaahinta qaab-dhismeedka horay loo qorsheeyay, iyada oo loo marayo is-dhexgal ka kooban jiidis iyo hoos u dhac. Waa suurtagal in la isticmaalo barxaddan gebi ahaanba bilaash, ama adoo bixinaya lacag gaar ah si aad u hesho qiyaastii 100 sheybaar xirfadeed.
Canva: Shaki la'aan waa mid ka mid ah aaladaha inta badan la isticmaalo marka la sameynayo sawir-qaadista, tan iyo wuxuu leeyahay buug-yare ballaaran oo arrimo ah, kaas oo si fiican loogu hagaajin karo xaalad kasta, marka lagu daro haysashada ilaha garaafka nooc kasta ha ahaadee.
Wareegga: Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku abuurto faahfaahinta kaliya 3 talaabo, iyo sidoo kale inaad awood u leedahay inaad ku daabacdo khadka tooska ah iyo / ama aad kula wadaagi karto shabakadaha bulshada iyo baloogyada, websaydhada, iwm.
Qalabka ku saleysan garaafka bulshada
Vizualize.me: Waa madal gebi ahaanba bilaash ah oo aad ku sameyn karto vitae-gaaga waxbarasho adigoo ku daraya xogta laga dhoofiyey boggaaga LinkedIn.
Sawir Noloshayda Dijital ah: Kuu ogolaanayaa inaad kala soo baxdo infographics-ka jpg., Halka ay jogitaanadan ku saleysan yihiin astaamaha warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter ama Youtube.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kheyraadka iyo Qalabyada lagu horumarinayo sawirada
Khaladaadka uu leeyahay naqshadeeye kasta oo garaaf ah waa inuu iska ilaaliyaa